Sidee ku cadaadisaa AVI Faylal ay ku Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
A file AVI waaweyn ama qaar ka mid ah files AVI weyn inta badan ku siin karaan dhibaato. Ay hay'adaha xad buurbuurnaayeen, marka la barbar dhigo qaab kale oo multimedia, oo inta badan ka tarta badan ee degan naga meel disk, taas oo keeni in xawaaraha orodka hoose iyo hoose oo ka mid ah computer. Waxaa intaa dheer, waxaa kale uu keenaa dhibaato marka aan rabno in aan la wadaagno filimada AVI aannu u jecel on YouTube ama Twitter. Ma suroobi karaa waddo ku cadaadisaa files AVI in Windows? Sure, fadlan raac this article. (Ogsoonow, version Mac ah kuu ogolaanayaa inaad cadaadin AVI Mac.)
Qeybta 1: Solutions ku cadaadisaa files AVI
Fikrad oday ah waa in ay ku cadaadisaa files AVI qaar ka mid ah danabka cadaadi caadiga ah sida pkzip ama faylasha .rar. Si kastaba ha ahaatee, natiijadu waa yar lagu qanci karo, aynu isku daydid wax cusub.
Xalka 1: badalo aad files AVI jir ah u files AVI cusub ama qaab kale sida MP4, MKV, M4V files. Iyadoo xirfadaha kelmadaha iyo Deji cusub, waxa ka abaalmarin doonaa size yar eego.
Xalka 2: cadaadisaa file AVI aad by iyaga sixiddiisa: 1) jar files AVI aad: tirtirto qaybo macno darrada ah oo kaliya sii qayb aad u jeclaystay. 2) noola aad AVI video sida aad u dhadhan daawashada.
Xalka 3 : dib-beegyada uu u: aad Dejinaynaa heerka qaab dhismeedka, heerka yara, xal, iwm in lagu yareeyo xajmiga si weyn.
Nasiib wanaag, waxan oo dhan-in-mid video Converter (Windows 8 taageeray) ku gaari kartaa dhammaan hawlaha kor ku xusan. Waa in dhammaan qaabab kale loogu badalo kartaa files AVI asalka la waafaqsan weyn. Iyada oo ay awood diinta Dufcaddii oo wuxuu dhisay-in qalabka tafatirka, aad cadaadin karo files AVI ee farahaaga. Halkan yimaado waano u faahfaahsan ee Windows. (Waayo, dadka isticmaala Mac, waxaad halkan kala soo bixi kartaa hawadda AVI ee Mac.)
Qeybta 2: Tilmaan tallaabo-tallaabo ku cadaadisaa files AVI
Diyaarinta : Download video Converter taas, oo soo dajiyo. Laba nooc ayaa laga heli karaa (version Mac iyo version Windows (Windows 10 ka mid ah), wadaagaan feature la mid ah), oo halkan inaan qaato version daaqadaha sida tusaale.
Talaabada 1: shuban files AVI si aad u this software riixo AVI
Ku rakib oo ay maamulaan this hawadda AVI, jiididda iyo hoos u files AVI in interface ugu weyn, ama u tag bar Menu iyo dooran "Beddelaan" "Add Faylal ay" si ku shuban files AVI aad. Waxaad ku dari kartaa laba files AVI iyo samayn diinta Dufcaddii si loo badbaadiyo waqtiga aad si weyn.
Talaabada 2: cadaadi files AVI aad by falinjeeerka ama beerista (Ikhtiyaar)
Cadaadi files AVI by falinjeeerka: Tag Edit goo. Oo waxaa jira mid ka mid ah habka la heli karo. Jiid bar slide ay u guuraan hore iyo xagga dambe. Marka ay soo gaarto booska saxda ah, riix badhanka maqas-sida in uu kala jabiyo video asalka iyo aad samaysay. Markaas riix OK inuu ku soo laabto interface ugu weyn.
Cadaadi files AVI by abuurka: Tag "Edit" button on video kasta oo wax bar, oo markaas dooran "Dalag" ka edit suuqa kala pop-up ah.
Riix qaab icon ee "Output Qaabka" Murayaad in la furo liiska dropdown ka dooro AVI, ama MKV, MP4, M4V, FLV, iwm ka "Qaabka"> "Video"
Tag qalabka-sida "Settings" badhanka si ay u dejiyaan-beegyada uu u audio iyo video, oo ay ku jiraan xallinta, heerka jir, encoder, bitrates, iwm hab Tani waxay jari kartaa size AVI aad u badan.
Talaabada 4: Start Compressing AVI hadda gudbiyo
Guji "Beddelaan" Oo tanuna ha smart video Converter (Windows 8 taageeray) sameeyaan inta kale adiga. Haddii aadan rabin in ku dhawaad ​​sugaan waqtiga diinta, waxaad u sheegi kartaa waxa maamula ee asalka ah. Waa intaas. Great shaqo!
> Resource > Video > Sidee ku cadaadisaa AVI Faylal ay ku Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)